Nepali Rajneeti | बज्यो खतराको घण्टी आगामी ३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिनः जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डे
बज्यो खतराको घण्टी आगामी ३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिनः जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डे
बैसाख २९, २०७८ बुधबार ४६२ पटक हेरिएको
काठमाडौं । आगामी ३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था हुने जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले बताएका छन् । अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चर्को अभाव देखिएपछि यो अवस्था अझै ३ हप्ता रहने उनले बताएका छन् ।
उनले ६ फिटभन्दा धेरै दुरी कायम गर्ने, साबुन पानी/स्यानिटाइजरले निरन्तर हात सफा गरेर गर्ने, भेटघाट बन्द गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन पनि सवै नागरिकलाई अपिल गरेका छन् ।
यसपटकको कोरोना भाइरसको प्रजातिलाई नजरअन्दाज नगरी सरकारले गरेको कडाइलाई साथ दिँदै सेल्फ लकडाउनमा बस्न पनि डा. पाण्डेले आग्रह गरेका छन् ।